MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardKyite Yar Khaw Faq - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ကြိုက်ရာခေါ် အစီအစဉ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကြိုက်ရာခေါ် ဆိုသည်မှာ MPT မှ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစု၊မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပိုမိုဆက်သွယ်နိုင်ရန် သက်သာသော နှုန်းထားဖြင့် ပြည်တွင်းဖုန်းအားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်လေး ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့် ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ကိုမဆို ဝယ်ယူပါက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပြည်တွင်းမှ ဘယ်ဖုန်းလိုင်းကိုမဆို ခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပက်ကေ့ချ် ထပ်မံဝယ်ယူတိုင်းမှာလဲ ပက်ကေ့ချ် ၏ voice minutes နှင့် သက်တမ်း များကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၁၅ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ၉၉၇ ကျပ် ၉၂ မိနစ် ၁၅ ရက် [သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ၇ရက်အတွင်း လက်ကျန်မိနစ်များ သယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်] *997*1#
၃၀ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ၁၉၉၇ ကျပ် ၁၉၀ မိနစ် ၃၀ ရက် *997*2#
အစီအစဉ်ကို မည်သူတွေ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
MPT GSM/WCDMA prepaid and postpaid [ဆွေသဟာ(သို့မဟုတ်)ရှယ်ပြော(သို့မဟုတ်)ရွှေစကား နှင့် Base Tariff အစီအစဉ်] အသုံးပြုနေသူများအားလုံး ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အစီအစဉ်ကို ရယူရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း?
ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
Customer Journey and Voice Minutes Acquisition
ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
၁၅ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် နှင့် ၃၀ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ် (၂)မျိုး ရှိပါသည်။
မိနစ်သယ်ဆောင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုရသေးတဲ့ မိနစ်တွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?
ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသလား?
ရပါတယ်။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် များကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက *997# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၇)ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။